पैसा यसरी बचत गर्न सिक्नुहोस,अभाव कहिले हुने छैन | Yangwarak Focus
Home Uncategorized पैसा यसरी बचत गर्न सिक्नुहोस,अभाव कहिले हुने छैन
पैसा यसरी बचत गर्न सिक्नुहोस,अभाव कहिले हुने छैन
१४ माघ २०७७, बुधबार ०९:५९
माघ १३/तपाईंलाई पैसाको राम्रो व्यवस्थापन गर्नका लागि गणितमा राम्रो हुनु पर्दैन । घर खर्चको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि तपाईंले आफ्नो खर्च गर्ने शैलीमा केहि चनाखो हुनु जरुरी हुन्छ ।
घरखर्च व्यवस्थापन सहि तरिकाले गर्नुमात्र तपाईंको अन्तिम उपलब्धी भने होइन । आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा भोलिका लागि बचत गर्दै जानु वा ऋण भए त्यो तिर्दै जानु पनि अपरिहार्य हुन्छ ।
घरायसी बजेटको राम्रो व्यवस्थापन गर्नको लागि सम्पूर्ण आय–व्ययको विवरण रेकर्ड राख्नुपर्छ । आम्दानी र खर्चको विवरण रेकर्ड लाग्दा पट्यार लाग्दो भए पनि वास्तवमै तपाईंलाई आम्दानीको राम्रो व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
हामी तपाईंको घरेलु बजेटको कुशल व्यवस्थापन गर्न सघाउ पुग्ने १० टिप्सका बारेमा जानकारी गराउँदै छौं ।
१) परिवारको आम्दानी
सबैभन्दा पहिला तपाईंले घरायसी बजेट विवरणको शिर्षस्थानमा आफ्नो कुल आम्दानी लेख्नुपर्छ । आम्दानीमा तपाईंका परिवारका सदस्यहरुको कमाई पनि जोडेर राख्न सक्नुहुन्छ । यदि आम्दानी हरेक महिना तलमाथि भइराख्छ भने औषत आम्दानी विवरण राख्नुहोस् ।
यसबाहेक तपाईंले केहि अतिरिक्त रकम आम्दानी गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई आम्दानी र खर्चको बिवरणमा नलेखी बचत वा सानो लगानीको लागि छुट्टै राख्न सक्नुहुन्छ ।
२) मासिक हुने नियमित खर्च
अब तपाईंको मासिक रुपमा हुने निश्चित खर्चहरु समावेश गर्नुहोस् । यी खर्चहरुलाई कुल आम्दानीबाट घटाउनुहोस् । निश्चित खर्चहरुमा ऋणको किस्ता, घरभाडा, स्कुल फिस, केवल टिभी, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली, पत्रिका, रासन, कर, यातायात खर्च आादि पर्छन् ।
अघिल्लो महिना भएको खर्चको आधारमा पनि मासिक नियमित खर्च यति हुन्छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । यी बाहेक अन्य खर्चहरु पनि हुन्छन् भने त्यसलाई औषत रुपमा आँकलन गरी खर्चमा जोडेर कुल आम्दानीबाट घटाउनुपर्छ ।
३) खर्चपछिको कुल आम्दानी
आम्दानीबाट घरायसी सम्पूर्ण खर्चहरु घटाएर निस्किएको बाँकी रकम तपाईंको कुल आम्दानी हो । बाँकी रहेको रकमलाई आफ्नो बजेट योजनाको तालिकामा छुट्टै टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ । कथम कदाचित तपाईले हिसाब गर्दा आम्दानीबाट खर्च घटाउदा परिणाम नेगेटिभ आयो भने तपाईंले आम्दानीभन्दा धेरै खर्च गरेको बुझिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा तपाईंले खर्चको पुनः मुल्यांकन गर्नुअघि तपाईंको खर्चलाई ‘चाहना’ र ‘आवश्यकता’ बिचमा विभाजन गर्नुपर्छ । यदि यसो गर्नु भएन भने तपाईले खर्च धान्न थप ऋणमा डुब्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
४) आपतकालिन कोष खडा
तपाईंको आम्दानीबाट खर्च घटाउदा बचेको कुल आम्दानीबाट १० देखि ३० प्रतिशत रकम आपतकालिन कोषका लागि छुट्याउनुहोस् । अझ यसका लागि तपाईंले नजिकैको बैंकमा मासिक रुपमा निश्चित रकम बचत पनि गर्न सक्नुहुन्छ । यो रकम कुनै आपतकालिन अवस्था आइपर्दा मात्र प्रयोग गर्नुहोस् ।
५) पुरै परिवारलाई यस योजनामा समावेश गर्नुहोस्
घरको बजेट योजनामा परिवारका सबै सदस्यलाई सामेल नगराइकन तपाईं एक्लैले यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न । सबैको खर्च गर्ने बानीमा प्रतिबन्ध लगाउन कडा रुपमा प्रस्तुत भई आफूलाई कठोर र गलत आचरणको व्यक्तिको रुपमा प्रस्तुत गर्नु ठिक हुदैन ।
यसका लागि कसरी घरायसी खर्चलाई कटौती गर्न सकिन्छ भनेर परिवारका सबै सदस्यसँग सल्लाह लिने र आफूले पनि सुझाव दिएर आग्रह गर्नु उचित हुन्छ । यदि तपाईंका साना बच्चाहरु छन् भने उनीहरुलाई पनि यस प्रक्रियामा समावेश गर्न सकिन्छ ।
यसले बच्चाहरुमा पैसा व्यवस्थापनको भावना र सचेतनाको विकास हुनुको साथै कुन चिजको मूल्य कति पर्छ भन्ने कुरा बुझ्न पनि सहयोग पुग्छ ।
६) खर्च गर्ने बानीमा समायोजन
सम्भावित खर्चहरु बाहेक अप्रत्याशित रुपमा हुन आउने खर्चको लागि पनि केहि पैसा बचत गर्नुपर्छ । कहिलेकाहिँ आफन्त वा साथीभाईकोमा विवाह समारोह तथा शुभकार्यहरु हुन सक्छन । कुनै बेला आफूले पनि केहि विशेष अवसरमा पाहुना निम्त्याएर भोज भतेर गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा पैसा खर्च हुने भएकाले केहि रकम छुट्याएर राख्नु उत्तम हुन्छ ।
तपाईंको बाहिर गएर खाने, रमाउने गरी अनावश्यक खर्च गर्ने बानी छ भने त्यसलाई त्याग्नुपर्छ । आवश्यकता र चाहना बिचको भिन्नता बुझेर चल्न सिक्नुपर्छ ।
७) किनमेल गर्दा सूचि बनाउने
किनमेल गर्न जाँदा सूचि नबनाई जानु हुँदैन । सूचीलाई एउटा अनिवार्य नियमको रुपमा लागू गर्नुहोस् । सम्भव भएसम्म किनमेलमा निस्कदा साना बच्चाहरुलाई साथमा लैजान हुँदैन । बच्चाहरुले अतिरिक्त खर्च गरिदिन्छन् ।
जहिले पनि किनमेल गर्न जाँदा आफूलाई आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरुको मात्र सूचि बनाउनुहोस् र त्यति नै रकम बोक्नुहोस् । बजारमा किनमेलमा निस्कँदा आवश्यकताभन्दा बढी रकम बोकेर हिँड्न हुँदैन ।
यदि कुनै सामान किन्दा तपाईले बनाउनुभएको सूचीको मूल्यभन्दा बढि तिर्नुप¥यो भने अर्को सामानमा त्यसलाई घटाएर मिलाउनुहोस । यस्तो बानीको विकास गर्न एकदमै जरुरी पर्छ किनभने यसले तपाईको बजेटको योजनालाई सुदृढ बनाउनमा मद्दत पुग्छ ।
८) क्रेडिट कार्डको दुरुपयोग नगर्नुहोस्
अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराउन थालेका छन् । क्रेडिट कार्डबाट आफुलाई आवश्यक पर्दा निश्चित रकम निकालेर निश्चित समयसम्म खर्च गर्न सकिन्छ । आफ्नो क्रेडिट कार्ड आपतकालिन अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुहोस् ।
तपाईलाई मन पर्ने ब्राण्डको सामान बजारमा अभाव हुदैछ वा सकिदैछ भन्दैमा त्यसलाई अत्यावश्यक मान्न सकिदैन । यदि तपाईको आवेशमा खर्च गर्ने बानी छ भने आफ्नो क्रेडिट कार्ड परिवारका कुनै जिम्मेवार सदस्यलाई राख्न दिनुहोस् ।
यदि महिनाको अन्त्यतिर पैसा सकियो र अभाव हुन थाल्यो भने यो बुझ्न सकिन्छ कि तपाईले आफ्नो बजेट योजनाको सीमा नाघेर खर्च गर्नुभयो । तपाईले आफ्नो क्रेडिट कार्ड अनावश्यक कार्यमा खर्च गर्नुभयो भने तपाईले अर्को महिनाको कुल आम्दानीबाट त्यो रकम र ब्याज घटाउनुपर्ने हुन्छ ।
९) अतिरिक्त पैसा कमाउने उपायको खोजी
चाहे तपाईको कमाईले घरको मासिक खर्च मज्जाले पुगिरहेको छ भने पनि बचतको लागि केहि अतिरिक्त कमाइ हुने उयाय सोच्नुपर्छ । बिहान स्कुल तथा कलेजमा क्लास लिन सकिन्छ वा ट्युसान पढाउन पनि सक्नुहुन्छ । यसरी अतिरिक्त आर्जन गरी आफ्नो बजेटलाई सुदृढ बनाई थप रकम बचत गर्न सकिन्छ ।
१०) घरायसी बजेटको पुनः मूल्यांकन
तपाईले सुरुको महिना राम्रोसँग घरायसी बजेटको योजना तयार पार्नुभयो र सोही अनुरुप कार्यान्वयन गर्नुभयो भन्दैमा अर्को एक महिनासम्म फेरी त्यसलाई हेर्नु पर्दैन भन्ने हुँदैन । निश्चित खर्चबाहेक हरेक महिना तपाईको बजेटमा परिवर्तन आउन सक्छ । यसको मतलव तपाईले तयार पार्नुभएको योजना र तालिकालाई धेरै पटक मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गएको महिना भएका अतिरिक्त खर्च र अप्रत्याशित खर्चलाई छुट्टै टिपेर राख्नुहोस् । यस्ता कुराहरु अलग्गै लेखेर राख्नाले तपाईलाई आफ्नो खर्च गर्ने बानीको बारेमा थाहा हुन्छ ।
आपूmले तिर्नुपर्ने विभिन्न विद्युत, पानी, इन्टरनेट, टेलिफोन, सवारी साधनका बिलहरु समयमै तिर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । यसले गर्दा जरिवाना तिर्नबाट जोगिन सकिन्छ । आफ्ना परिवारका सदस्यसँग बसेर पैसा जोगाउनको लागि कसरी यस्ता उपयोगिताहरुको कम खपत गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाह गर्नुपर्छ ।
अनावश्यक रुपमा बत्तीहरु नबाल्ने, हिटर नबाल्ने, टेलिफोनमा धेरै कुरा नगर्ने बानीले पनि बिल भुक्तानी गर्दा केहि राहत मिल्न सक्छ ।
Previous articleदमाममा राहदानी संकलन गर्न अस्थायी कार्यलय
Next articleसम्झानामा डा. लक्सम्बा – अमित `मिहाङ´ थेबे
एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतियो तर निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्र र एमाले किराति र तिवारीको नाममा
३ लाख ४८ हजार डोज कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप नेपाल आइपुग्यो
“खुवालुङ” बचाउन सांस्कृतिक आन्दोलन
`एन्जल´ले गोलि लागेर ढल्नुअघि के के गरिन् ? म्यानमार आन्दोलनमा मारिएकी १९ बर्षीया युवतीको...
सुमन सहयात्री - १४ माघ २०७७, बुधबार ०९:५९
फाल्गुन २२ सनिबार बीबीसी । म्यानमारमा सैनिक कूविरुद्ध भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर मारिएकी १९ वर्षिया किशोरीको अन्त्येष्टिमा बिहीवार मान्डलेमा ठूलो भिड जम्मा भएको थियो। एन्जल...
साहित्यकार महासङ्घको तमुवान राज्य समिति गठन संयोजकमा छम गुरुङ चयन
फाल्गुन २२ सनिबार आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघको तमुवान राज्य समिति गठन गरिएको छ । शनिबार पोखरामा आयोजित एक भेलाबाट छम गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको...
फाल्गुन २३ आइतबार "खुवालुङ" को संरक्षणको निम्ति फाल्गुन-२४ गते खुवालुङ क्षेत्रमा विभिन्न सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा खुवालुङ बचाउ सांस्कृतिक आन्दोलन-२०७७ हुने भएको छ । विभिन्न जातीय संघ सस्थाहरु...
फाल्गुन २३ आइतबार काठमाडौं । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको ३ लाख ४८ हजार डोज नेपाल आइपुगेको छ । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने खोपको पहिलो खेप आइतबार...
एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतियो तर निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्र र एमाले किराति र...
फाल्गुन २३ आइतबार काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेकपा नामको दल ऋषि कट्टेल नेतृत्वको दललाई दिएसँगै तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको छ। यी दल मिलेर बनेको...
एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतियो तर निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्र र...
कोरोना अपडेट: शनिबार थप ४७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि